Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Shaacisay in ay soo Dhameystirmeyn Ergadii ka Qeyb Gali lahayd shirka Jubbooyinka oo Beri furmaya | Somaale.com
Dowladda Federaalka Soomaaliya oo Shaacisay in ay soo Dhameystirmeyn Ergadii ka Qeyb Gali lahayd shirka Jubbooyinka oo Beri furmaya
Xukuumadda Soomaaliya ayaa ku dhawaaqday inay soo dhameystirmeyn ergadii ka qeyb geli lahayd shirweynaha looga hadlayo Jubbooyinka, iyadoo shirkaasina uu si rasmi ah u furmi doono maalinta berito ah.
Wasiir kuxigeenka warfaafinta Boostada, Isgaarsiinta iyo Gaadiidka ee Xukuumada Soomaaliya C/shakuur Cali Mire kana mid ah gudiga qaban qaabada shirka oo shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa sheegay in shirka uu qorshihiisu ahaa in gelinka dambe ee maanta uu furmo, hayeeshee ay jiraan ergo muhiim u ah shirka oo diyaaradii siday ay soo daahday.
Mudane Cabdi shakuur ayaa xusay in ergada ka qeyb galaysa shirka ay intooda badan ku suganyihiin magaalada Muqdisho, ayna diyaar u yihiin in ay ka qeyb galaan, isagoo intaa raaciyay in shirka uu berito si rasmi ah uga furmi doono Muqdisho.
“Beri subax ayuu furmi doonaa Shirka, Ergooyinka way soo xaadireen oo qaar badan ayaa ka yimid jubbooyinka, wayna qaateen kaararkii ay shirka kaga qeyb geli lahaayeen, wax kale oo dhib ahna ma jiraan, sidaa darteed beri ayuu shirka furmi doonaa haddii uu Alle idmo” ayuu C/shakuur Cali Mire hadalkiisa ku daray.
Shir lagu mideynayo gobolada Mudug iyo Galgaduud oo ka dhacay Magaalada Muqdisho 0
Ethiopia oo Baydhabo la wareegay 0